I-Forbes: ukwanda okuncane ku-Ubuntu bese uyangena ku-Windows 10 | Kusuka kuLinux
I-Forbes: ukwanda okuncane kwe-Ubuntu nokuncipha kwe Windows 10
I-Microsoft Windows 10 ibe nokwanda okuqinile kwabasebenzisi ezinsukwini zayo zokuqala, njengoba abasebenzisi abaningi bezinguqulo zangaphambilini bejahe ukuthuthukela enguqulweni entsha. Ikakhulukazi labo ababesasebenza iWindows 7. Ngakho-ke, Windows 10 izuze izibalo ezithile zemakethe ezihehayo. Kepha izinkinga ezinezibuyekezo ezimbi ababenazo futhi abaqhubeka nokuba nazo, azishiyi ukunambitheka okuhle emlonyeni wabasebenzisi abaningi.
Ngokusho kweForbes (nayo esetshenzisile idatha yezibalo evela kwaNetMarketShare), Windows 10 ibone ukuthi muva nje uke wawa kancane ngenombolo yayo yabasebenzisi. Ngokuqondile, baveza ukuthi isukile ku-57,34% yaya ku-56,08%. Lokhu akuvamile, ngoba akubanga khona iWindows 11 yokucacisa ukunyakaza kwabasebenzisi kuya enguqulweni entsha, njengoba kungenzeka ngeWindows 8.x noma 7 lapho kuvela u-10.
Ngaphezu kwalokho, kubonakala sengathi ukusatshalaliswa Ubuntu kubone ukukhuphuka. Ngokwezibalo ezishicilelwe yiForbes, isuke ku-0,27% ngoMashi yaya ku-1,87% ngo-Ephreli. Uma lokhu kuyiqiniso, kungaba njalo ukwanda ngo-599% kwe-Canonical distro kuqhathaniswa nenyanga eyedlule (kungasho ukuthi manje inabasebenzisi abangaphezulu kuka-599% kunengqikithi). Ukukhuphuka okukhulu okungakhuthazwa ukuthuthukiswa okusha kwe-Ubuntu 20.04, phakathi kwabanye.
Ngakolunye uhlangothi, ohlangothini lwe-apulaOlunye uhlelo olukhulu lokusebenza ngokuya ngabasebenzisi bedeskithophu, kubukeka sengathi iMacOS Catalina ibingabona ukwanda kwabasebenzisi ngo-Ephreli. Ukukhula kuleli cala bekungaba lula kakhulu kunokukaBuntu, ngoba kungasho ukwanda ngo-4.15% uma kuqhathaniswa noMashi.
Yize zibukeka zincipha kancane futhi zanda ngokuya nge- abasebenzisi bangempelaKusengumbono ohlaba umxhwele ... Kodwa-ke, lezi zifundo zezibalo azithembekile ngo-100%, ngoba zisekelwe ngezikhathi ezisebenzayo ekuvakasheleni amawebhusayithi, zihlaziya uhlelo ezivela kulo.
Imininingwane engaphezulu - Netmarketshare
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Forbes: ukwanda okuncane kwe-Ubuntu nokuncipha kwe Windows 10
I-Redis 6.0 isivele ikhishiwe futhi iza nokuthuthuka okuningana okuphawulekayo